शरीरमा रुखको हाँगा पालाउने विचित्रको रोग, उपचार असम्भव | Rajmarga
शरीरमा रुखको हाँगा पालाउने विचित्रको रोग, उपचार असम्भव
संसारमा यस्ता मानिसको संख्या ६ भन्दा पनि कम छ जो एपिडार्मोडिसप्लासिया भेरुसीफोर्मिसबाट पीडित छन् । यो रोगले मानिसको शरीरमा रुखजस्तो हाँगा निस्कन लाग्दछ । यहाँ केही यो रोगबाट पीडितका बारेमा उल्लेख गरिएको छः–
बंगलादेशका अब्दुल बाजनदारलाई मानिसहरुले ट्रीम्यानको नामले चिन्दछन् । दश वर्षअघि उनी छालाको यो विकृतिको शिकार बनेका हुन् । जसका कारण उनको हात र खुट्टाबाट रुखको हाँगाजस्तो पलाएको छ । रिक्सा चालक अब्दुलले पहिला त यसलाई बेवास्ता गरे तर विस्तारै हात र खुट्टामा फैलदै गयो ।
१६ पटक सर्जरी
ढाका मेडिकल कलेज हस्पिटलमा अब्दुल बाजनदारको १६ पटक सर्जरी भइसकेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार उनी अब चाँडै ठिक हुनेछन् । यो रोगका कारण अब्दुल कयौ वर्षसम्म आफ्नी छोरीलाई छुन पनि पाएनन् । जब संचार माध्यममा उनका बारेमा खबर सार्वजनिक भयो तब प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उनको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिन् ।
बंगलादशकै दश वर्षकी एउटी किशोरीको अनुहारमा रुखको हाँगाजस्तो देखिन थाल्यो । डाक्टरहरुका अनुसार सहाना खातुन ‘ट्री म्यान सिन्ड्रोम’ बाट पीडित बालिका हुन् । सहानाको अनुहार र कान नजिकै मासु पलाएर आएको छ । सहानाको उपचार पनि ढाका मेडिकल कलेज अस्पतालमा भइरहेको छ।
मजदुरी गरेर पेट पाल्ने सहानाका पिता मोहम्मद शाहजहाँका अनुसार आफ्नी छोरीको अनुहारमा पहिलोपटक यसरी मासु पलाएर आउँदा उनलाई खासै चिन्ता थिएन । तर, जब त्यो तिब्रताका साथ बढ्न थाल्यो तब उपचारका लागि ढाका लिएर आए ।
ठिक हुने आशा
सहानाका चिकित्सक भन्छन्, उनमा यो रोग धेरै पुरानो भइसकेको छैन । आशा छ उनी चाँडै निको हुनेछिन् । मोहम्मद शाहजहाँ भन्छन्–हामी साह्रै गरिब छौ । म प्रार्थना गरिरहेछु कि मेरी सुन्दर छोरीको अनुहारबाट डाक्टर रुखजस्तो हाँगा निकाल्न सफल होउन् ।
इन्डोनेसियाको डेडे कोस्वारा पनि यही रोगबाट पीडित थिए, उनको फेब्रुअरी २०१६ मा मृत्यु भयो । अब्दुल र सहानाको परिवार जहाँ उनीहरुका साथ छन्, यता डेडेले यो रोग लागेपछि परिवार, रोजगारी र स्वतन्त्रता सबै गुमाए । डाक्टरहरुका अनुसार अन्तिम दिनहरुमा डेडेले बाँच्ने आशा नै त्यागेका थिए । उनी अत्यधिक चुरोट पिउन थालेका थिए ।
सफल उपचार छैन
मार्च २०१७ मा रोमानियाको इयान टोएडर नामको व्यक्तिमा सबैभन्दा पहिला एपिडर्मोप्लासिया भेरुसीफोर्मिस पत्ता लागेको थियो । अहिलेसम्म यो रोगको रोकथामका लागि कुनै सफल उपचार खोजी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरु यो रोगको सामना गर्न अनेकौ तरिका प्रयोग गर्ने गर्दछन् । विशेषगरी यस्ता उपाय अपनाइन्छ, जसबाट मासु बढ्नबाट रोक्न सकियोस् । एजेन्सी
Previous post: १८ महिनाअघि मरेकी आमा बगैंचामा पानी हाल्दै देखिएपछि….
Next post: कुन कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहदैन ? जानी राखौ…